Ronaldinho Muxuu Ka Yiri Hadii Messi Dartiis Uu Barca Uga Tegay %
Halyeeygii hore ee kooxda kubada cagta Barcelona, wiilka lagu magacaabo Ronaldinho ayaa wuxuu qirtay in Lionel Messi uu isaga ka fiican yahay marka loo eego heerka uu ka taagan yahay kabtanka Argentina mihnada kubada cagta.
Labadaan ciyaartoy ayaa waxay Barcelona ay kusoo qaateen waayo qurux badan, iyagoona kusoo wada guuleystay koobab wuxuuna qof walba ogyahay inuu Ronaldinho uu yahay shaqsiga Messi soo garab qabtay waayihii uu soo barbaarayay.
Isagoo wareysi siinayay Majalada FFT ee kasoo baxda wadanka Ingiriiska ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay Ronaldinho in Messi uu yahay laacib leh tayo uu ku hogaamin karo Barcelona waqti kale oo guulo ah xitaa hadii uu kaligiis lee uu yahay.
“[Lionel] Messi waa wali wuxuu jiraa 30sano wuxuuna sameyn karaa waxyaabo kale, waxaana urajeynayaa inuu taariikhyo kale uu fiican uu ka sameeyo kubada cagta,” ayuu Ronaldinho ku jawaabay mar la weydiiyay sida uu u arko bandhig Messi.
“Isaga ma uusan ahayn mid aniga igu qasbay inaan kasoo tago Barcelona, laakiin waxaan ogaa inuu noqonayo mid aniga iga fiican, wuxuuna hada yahay midka aduunka ugu fiican,” ayuu hadalkiisa kusii daray Farsamo-yaqaankii hore ee Brazil.
“Sidaas darteeda, aniga waan uqirsanahay Lionel Messi, wax walba oo uu ka gaaray kubada cagta iyo xirfadiisa oo dhan, waxaana hada urajeynayaa wanaag badan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, laacibkii hore ee Barcelona, Ronaldinho.